खेलकूद – Page6– News Of Nepal
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल(आईसीसी)ले विश्वकप टी ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित गरेको छ । आईसीसीको सोमबार बसेको परिषद्को बैठकले आगामी अक्टोबर र नोभेम्बर महिनाका लागि निर्धारित विश्वकप टी ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो । कोरोना महामारीले निर्धारित..
इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटीका लागि यस सिजन सबैभन्दा ठूलो नतिजा इतिहाद वा विम्बली रंगशाला आएन, बरु सोमबार बिहान स्विजरल्यान्डमा भएको सुनुवाइमार्फत आयो । यसअघि युरोपेली फुटबल एशोसियसन (युईएफए) अन्तर्गतका प्रतियोगिताहरुमा सिटीमाथि लागेको २ वर्षको प्रतिबन्ध सोमबार कोर्ट अफ आर्बिटेसन..
एस्पानियोलमाथि संघर्षपूर्ण जीत निकाल्दै बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगाको उपाधि जित्ने होडमा आफूलाई कायम राखेको छ । यता, १–० ले पराजित भएको एस्पानियोल भने यो सिजन रेलिगेशनमा परेको छ । दोस्रो हाफको शुरुवातमा दुवै टोलीका एक–एक जना खेलाडीले रातो कार्ड पाएका थिए । भिडियो एसिस्टेन्टको रिभ्यूपछि..
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स(यूएई) र श्रीलङ्कापछि इन्डियन प्रिमियर लिग टी ट्वान्टी क्रिकेटको आयोजना गर्न न्युजिल्याण्डले प्रस्ताव गरेको छ । न्युजिल्याण्डले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका बीच भारतमा खेल्न सम्भव नभए न्युजिल्याण्ड आयोजनाका लागि इच्छुक रहेको जनाएको छ । आगामी अक्टोबर र नोभेम्बर महिनाका..
स्पेनिस ला लिगामा रियल म्याड्रिडले उपाधि जित्ने अभियान बलियो बनाउँदै लगेको छ। अंक तालिकाको शीर्ष स्थानको रियलले बिहीबार राति भएको खेलमा गेटाफेलाई १-० गोलले पराजित गर्दै दोस्रो स्थानको बार्सिलोनासँगको अग्रता बढायो। घरेलु मैदानमा खेल सकिन ११ मिनेट बाँकी छदासम्म गोल गर्न नसकेपछि रियल दबाबमा आएको..
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको उपाधि होड थप कठिन भएको छ । गएराति एट्लेटिको मड्रिडसँग २-२ गोलको बराबरी खेलेसँगै उपाधि होडमा रहेको बार्सिलोनालाई गम्भीर धक्का लागेको हो । घरेलु मैदान नाउ क्याम्पमा बराबरी खेलेसँगै बार्सिलोनाको शीर्ष स्थानमा फर्कने मौका समेत गुमेको छ । डिएगो कोस्टाको आत्मघाती..
अन्तत ३० वर्षपछि लिभरपुल क्लब फेरि इङल्यान्डको लिग च्याम्पियन बन्यो । ‘प्रिमियर लिग’ युगमा लिभरपुलले उपाधि जितेको यो पहिलो अवसर हो, २८ वर्षअघि इंलिस प्रिमियर लिग सुरु हुँदा सर्वाधिक १८ पटक माथिल्लो डिभिजनको लिग जितेको गर्विलो इतिहास लिभरपुलको थियो । तर, यसपछि उपाधि जित्नका लागि उसले वर्षौं–वर्ष..
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणले आक्रान्त बनाइरहेको वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन । खेलकुद क्षेत्रलाई पनि यसले निकै प्रभावित बनाएको छ । सरकारले गएको चैत ११ गतेदेखि लगाएको लकडाउनको समयमा सबै खेलाडीहरु प्रायः आफ्नै घर वा घर नजिकै ड्युटीमा खटिएका..
इंगल्याण्डको नेशनल लिगभन्दा तलका फुटबल रद्ध
शुक्रबार, चैत्र १४, २०७६ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विश्व फुटबल प्रभावित छ । सबैखाले फुटबल खेल स्थगित छन् । इंग्ल्याण्डको पाँचौ श्रेणीको लिग फुटबल नेशनल लिगभन्दा तलका सबै फुटबल यो सिजनको लागि अन्त्य गरिएको छ । नेशनल लिगभन्दा तलका तीन वटा डिभिजन अन्त्य भएको छ । यससंगै सबै रिजल्टहरु पनि हटाइएको छ । यसको अर्थ अब यी..
के तपाईं हरेक दिन बिहान–बिहान हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो? क्लब गएर नियमित व्यायाम गर्नुहुन्थ्यो? त्यसो भए यो आठ दिनको ‘लक–डाउन’ मा के गर्नुहुन्छ त? व्यायामका सोखिन मात्र होइन, अरूका लागि पनि आठ–आठ दिन घरमै बस्दा मोटाइने चिन्ता हुनसक्छ। यी सबैका लागि फ्रान्सका एक ३२ वर्षीय व्यक्ति उदाहरण बनेका..